Ireo toerana manan-danja indrindra - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Ny otely na alitara no mitana ny laharana voalohany. Io no milaza fa eo anivontsika lalandava ny Tompo. Ny toerana voatokana hamakiana ny Soratra masina na famakian-teny no manaraka azy. Eo no andraisantsika ilay Teny mahavelona. Ny Fiketrahan’ny mpampiangona kosa no farany. Eo no misy ny iraka manokana, ekena ho solontenan’i Kristy, mitarika, mamondrona ny vahoakan’Andriamanitra. Ireo no toerana sy fitaovana manan-danja indrindra ho an’ny fivoriamben’ny Fiangonana. Ireo telo ireo koa no manana ny hery lehibe manokana isehoan’ny fiombonana sy firaisana tanteraka misy eo amin’ny samy mpino: amin’izy samy izy, sy ao amin’i Kristy, ary ao amin’ny Trinite Masina. Voarakitr’ireo toerana sy fitaovana manan-danja ireo avokoa ny momba ny fiombonana (koinonia
amin’ny teny gireka) sy firaisan’ny mpino, sady asehon’ny litorijia miharihary izany rehetra izany.
Nitsangan-ko velona i Kristy, ilay Iraka (angelion amin’ny teny gireka), avy amin’ny Ray, nalefany hamonjy sy hanavotra antsika olombelona mpanota, hampiray antsika ao Aminy. Izy tokoa ilay Anjelin’ny fisainana lehibe, ary ny tanany no antsoina haneho ny heriny ao amin’ny Fanahy Masina, eo amin’ny tolotry ny Eglizy, mba hanova ny mofo sy divay ho zary Vatana aman-dRan’i Kristy. Izy no ilay Iraka (na Anjely) be voninahitra miray tanteraka amin’ny Ray ka mampiray antsika amin’ny Trinite Masina. Izy no naniraka an’i Maria, tamin’ny andro voalohan’ny herinandro, mba hilaza amin’ireo Mpianatra fa hialoha any Galilea Izy. Izy tokoa no ilay hany tena “Mpisorona” be voninahitra sy tsy manam-paharoa. Izy no ilay “otely anaovan-tsorona”. Miseho amin’ny endrika tsotra izany otely izany eto an-tany, araka ny hitantsika ao am-piangonana, fa feno voninahitra kosa any an-danitra: eo an-kavanan’ny Ray. Izy no “Zanak’Ondry atao Sorona”, manala ny hanoanana sy ny hetahetan’ireo rehetra mino sy manaraka azy. Sarin-teny mifono hevi-dalina fa mora takarina avokoa izany voalazan’ny Prefasy Paka faha 5 izany. Teny an’ohatra, tsy dia ilana fivoasana firy, nefa mora azontsika, noho ny fanazavana vokatry ny finoana ao am-pontsika.
Tadidio ny hevitry ny Otely (...)
Ny Tompo no miteny (...)
Manana ny lanjany ny fiketrahan’ny mpitarika (...)
(...) hitanao ao amin’ny gazety jiafainao ny tohiny. Misaotra